Waa kee laacibkii ka wanaagsanaa CR7, Leo Messi & Maradona? Costacurta ayaa ka jawaabaya isagoo sidoo kale sheegay inay Inter haatan tahay kooxda 2-aad ee ugu xooggan Talyaaniga! – Gool FM
Waa kee laacibkii ka wanaagsanaa CR7, Leo Messi & Maradona? Costacurta ayaa ka jawaabaya isagoo sidoo kale sheegay inay Inter haatan tahay kooxda 2-aad ee ugu xooggan Talyaaniga!
Raage March 25, 2017
(Milano) 25 Maarso 2017 – Alessandro Costacurta ayaa rumaysan in la gaarey xilligii uu Silvio Berlusconi iibin lahaa kooxda AC Milan, balse “ay Inter tahay kooxda haatan ugu wanaagsan Juventus kaddib.
”Haleeygii hore ee daafaca uga dheeli jirey kooxdii guusha badnayd ee Grande Milan ee dabayaaqadii 80-meeyadii iyo horraantii 90-meeyadii ayaa rumaysan in Berlusconi uusan hadda kaddib sii maamuli karin koox casri ah.“Milkiiluhu waa gaboobey sidaa darteed siima maarayn karo kooxdan waloow uu lacag badan geliyay.
Waxay ila tahay inaan u baahan nahay lacag cusub, milkiile iyo maareeyn cusub.” ayuu Costacurta u sheegay BBC World Service.“Ilama aha in ay Milan dib usoo laaban karto sanadka soo aaddan. Inter ayaa Juventus usoo dhowaan karta sanadka xiga, maaddaama ay haystaan lacag fara badan, afkaaro badan iyo laacibiin wanaagsan, sidaan qabo Inter waa kooxda haatan ugu wanaagsan kaddib Juventus.
” ayuu raaciyay raacihii rafka ahaa ee Costacurta.Costacurta ayaa deeto waxaa la waydiiyay laacibkii uu ugu nebcaa inuu ka hor tago.“Laacib ahaan, midkii iigu adkaa ee aan wajaho wuxuu ahaa Ronaldo – midka Brazilian-ka ah. Haddaad waydiiso (Paolo) Maldini, (Fabio) Cannavaro ama (Alessandro) Nesta, isla jawaabtan ayay ku siin doonaan.
Ronaldo wuxuu ahaa nin dheereeya, farsamo badan isla markaana jir ahaan dhisan.” ayuu yiri.“Wuu ka wanaagsanaa (Diego) Maradona, ka fiicnaa Cristiano Ronaldo, kana wanaagsanaa (Lionel) Messi.” ayuu hoosta ka xarriiqay.
RASMI: Iibkii AC Milan oo jid cusub qaaday! (Sharikaddii SES oo gebi ahaanba mid cusub lagu bedeley & waqti cusub oo loo qabtay saxiixa)
Barcelona oo Cruyff u sameeneysa xus noocyo kala duwan oo ay ka mid tahay garoon loogu magacdarayo